Nyamko Saboni oo sheegtay inay haatan diyaar u tahay inay gasho doorashooyin cusub Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaNyamko Saboni oo sheegtay inay haatan diyaar u tahay inay gasho doorashooyin cusub
Nyamko Saboni oo sheegtay inay haatan diyaar u tahay inay gasho doorashooyin cusub
January 22, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Hogaamiyaha Xisbiga Liberalerna, Nyamko Saboni, ayaa sheegtay inay haatan diyaar u tahay inay gasho doorashooyin cusub oo dalka ka dhaca.
Wareysiga ay siisay SvD, Saboni waxay u sababeysay mowqifkeeda soo jeedinta dowlada ee ku aadan siyaasada cusub ee soo galootiga, taasoo ay ku tilmaamtay inay ka dhigeyso koobka inuu buuxdhaafo isla markana keeni karto in siyaasaddani ay horseedi doonto kordhinta socdaalka.
waxay tiri, waxaan diyaar u ahay inaan ka soo kaco miiska wada hadalka … Tani waa arrin ku saabsan mustaqbalka Sweden.
Laakiin waxay raacisay, “Ma awoodno inaan ku dhawaaqno doorashooyin cusub, laakiin dabcan ra’iisul wasaaruhu wuu sameyn karaa taas. Waxaan marwalba diyaar u ahay inaan la kulmo codbixiyaasha. … Ma doonayo doorashooyin cusub xaqiiqdiina kuma jiro xaaladan. Sidaa darteed, waxaan rajaynayaa in aan helno ra’iisul wasaare caqli badan oo aan doonaynin in uu buuq abuuro una hoggaansamo heshiiskeenna. ”
Hogaamiyaha xisbiga Liberalka ayaa horaantii bishii Janaayo xaqiijisay inaysan sii wadi doonin la shaqeynta miisaaniyada hadii dowlada ay ku dhaqaaqdo sharciga cusub ee soo galootig